Max'ed Dhicisow: Oday Alshabaab u galay Dhagixii Qaaliga ahaa ee Ceel-Cali oo Naftiisa kala soo baxsaday! - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxamed Nuur Barre oo loo yaqaan Dhicisow wuxuu kasoo baxsaday Alshabaab, kadib sanad uu ka mid ahaa, wuxuuna u galay arrin yaab leh, isagoo ahaa dhaqaale raadis.
Ninkan oo ay oday lugaha naafo ka ah, ayna Alshabaab u bixiyeen Maxamed Ceeli-Cali, wuxuu sheegay inuu Al-shabaab u galay si uu wax uga helo dhaqaalaha Dhagax ay Alshabaab ka qaadeen degaankiisa Ceel-Cali ee Gobolka Hiiraan, kaasoo la sheegay inuu qaali yahay ioo dahab ama dheeman ku dhex jirto.
Dhagaxaas oo mar qabsaday baraha bulshada iyo warbaahinta waxaa Alshabaab kasoo iibsaday Ganacsato, isku dayday inay dalka ka dhoofiso, wuxuuna u gacan galay ciidamada NISA oo ka qabtay Ex. Kontrool Afgooye (Halkan ka Akhriso Warka Dhagaxaasi)
Maxamed Dhicisow wuxuu sheegay in Alshabaab ay u sheegeen in qiimaha dhagaxa ay dadka degaanka leeyihiin rubac, taasina ay ku qaaday inuu Alshabaab noqdo si uu dhaqaalahaasi isaga uga mid noqdo dadka maamulaya.
“Waxaan is iri haddii aad wax ka heleyso maa Shabaab iska noqotid.. Nin curyaan lugaha ka ah oo qallal qaba ayaan ahaa.. kadib waxaa la iga qaaday Ceel-Cali, lix bilood waxaan joogay Marjis oo ka tirsan degmada Aadan Yabaal.. kadib waxaa la ii qaaday degaan kale oo ku dhow Ceelbuur” ayuu yiri.
Wuxuu ka sheekeeyay sidii damaciisa uu hungoobay, kaliyana saddex bilood uu mushaar ka qaatay Alshabaab.. isagoo muddo 9 bilood joogay Galgaduud iyo Sh/Dhexe. kadibna uu ciidan ahaa wixii ka danbeeyay bishii Soonka (April).
“Fasax waa la ii diiday, waxan raadiyey qaab aan ku baxsado. Mobile markii laguu keeno bishii mar ayaa lagu keenayaa markii lacag kuugu soo dhacdo, duhurkii waa lagaa qaadaa..” ayuu yiri Maxamed Dhicisow oo muddo dheer ay ku qaadatay inu kasoo baxsado Alshabaab inta ay heleen, soona qaadeen ciidamada dowladda, iyadoo la geeyay Guriceel.
Previous articleXOG: Doorashada Aqalka Sare oo ka bilaaban doonta K/Galbeed iyo faragelinta Farmaajo & Lafta-gareen
Next articleAlshabaab Maxay uga gaabsatay inay sheegato Qarxintii Baska Ciyaartoyda ee Magaalada Kismaayo..?